Mifantoha amin'ny API hampitombo ny fampiharana anao (Del.icio.us sy Technorati) | Martech Zone
Zoma, Aprily 20, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa mamaky an'ity ianao dia mety ahitsy… fa mety ho hitanao fa ny ahy Technorati Laharana dia 0. Izany dia satria ny Technorati API dia tsy miverina laharana ho isan'ny antso (mamerina node nikatona io ).
Ary koa, Del.icio.us' API mihetsika. Nametraka olana izy ireo ka tsy misy lahatsoratra haverina amin'ny andro hafa raha mangataka tag manokana ianao. Androany dia mamerina ny firaketana voalohany ao anatin'io tag io fotsiny izy. Ny asa mandeha ho azy izay mandefa ny Read Daily ko tsy mba nandefa koa.
Nametraka fangatahana tamin'ny orinasa roa aho fa tsy mahazo valiny. Samy orinasa lehibe izy ireo izay tena nanatona ahy rehefa nila fanampiana aho taloha ary manantena aho fa hanao izany izy ireo izao. Mety tsy toa izany ireo orinasa roa ireo fa orinasa maro no mitsabo ny azy ireo API ho toy ny lafiny faharoa amin'ny serivisin'izy ireo na ny fampiharana azy.
Fahadisoana izay mety hahafaty ny orinasanao ato ho ato. Mihazakazaka mankany amin'ny tranokala 'semantika' izahay… miaraka amin'ny plugins, widgets, rss, pejy namboarina, sns. Izay hahatonga ny API ho manan-danja kokoa noho ny User Interfaces mihitsy. Ao anatin'ny Manapotsika fampiharana, mety mifandray amin'ny mpizara afovoany aho izay mifandraika amin'ny API maro. Raha orinasa Mashup aho dia tsy hanao orinasa tsy mandray ny azy ireo API ho zava-dehibe.
RNH, lesona iray izany Google nianatra aloha be. Raha mandinika tsara an'i Google ianao, ny tsirairay amin'ireo rindranasa entin'izy ireo eny an-tsena dia misy API matanjaka izay manasa ny faharanitan-tsaina avy amin'ny antoko fahatelo. Misy orinasa sy rindranasa tsy tambo isaina namboarina tamin'ireo API ireo ihany koa.
Aleo manohana ny faharanitan-tsaina avy amin'ny antoko fahatelo, misy kosa ny orinasa sasany miady amin'izy ireo. Tsy maintsy nanova ny anarany avy amin'ny Alexaholic i Statsaholic noho ny olana ara-barotra. Alao an-tsaina izany hoe… misy manangana User Interface mahafinaritra izay mampiroborobo ny statistika novokarinao. Nozarain'izy ireo tamin'ireo mpampiasa ana hetsiny (angamba an-tapitrisany) ireo antontan'isa ireo. Fahatongavana izay mety tsy mbola napetraka raha nanandrana nanao izany irery ianao… ary tezitra amin'izy ireo ianao.
Tamin'ity herinandro ity tao amin'ny Indianapolis Book Club, dia niresaka momba izany izahay Ny Starfish sy ny Spider: ny herin'ny fikambanana tsy misy mpitondra. Ny hevi-dehibe amin'ity boky ity dia ny Spider misolo tena ny fikambanana ambony ambany. Vonoy ny loha fa tsy ho velona ny vatana. Tapaho ny Starfish ary avy eo mifono Starfish 2 ianao.
Google Blogsearch dia nandray ny anjaran'ny tsena avy amin'ny Technorati. Tiako i Technorati ary mbola mieritreritra fa mora kokoa ny miasa, fa tsy misy iadian-kevitra fa Google no kamio lehibe ao amin'ny fitaratra aoriana. Namoaka ny Google ny Google tamin'ity herinandro ity Ajax Feed API… Ity dia fanitsakitsahana fanampiny ny Technorati na eken'izy ireo izany na tsia. (Izy io koa dia mifaninana amin'ny Yahoo! Pipe.)
Tsy azoko ny ahiahin'ny orinasa manokatra ny API-dry zareo ary miantoka ny fahombiazany sy ny fanohanan'izy ireo ho an'ny orinasa hafa, handroso bebe kokoa. Betsaka ny tombony… tsy dia firoboroboana ny interface interface, tsy misy bibikely, tsy dia misy mpanohana, kely ny bandwidth (an API Ny antso dia data kely kokoa noho ny pejy iray) ary orinasa maro miankina amin'ny orinasanao. Tsy olona tianao hifaninana na hampivahiny ireo, fa olona irinao handray sy hanome valisoa anao.
Raha sary an-tsary ny lozisialy an-tranonkalanao dia azonao atao ny mieritreritra ny UI anao ho toy ny ravina sy ny API toy ny fakanao. Ilaina sy tsara tarehy ny ravina, fa ny fananana faka lalina dia hiantoka ny ho avin'ny orinasa.
Apr 21, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Admittedly, keeping our back-end operations smooth and improving the website take precedence but, fear not, our API users dia important to us. Glad to see your widget displaying the rank again, I think that validates that the fix made to the API took effect 🙂
Apr 21, 2007 ao amin'ny 6: PM PM